Gabdho mataane ah oo guursanaya wiilal mataane ah! – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeARIMAHA BULSHADAGabdho mataane ah oo guursanaya wiilal mataane ah!
Gabdho mataane ah oo guursanaya wiilal mataane ah!
March 1, 2018 Cabdi nuur ARIMAHA BULSHADA, WARARKA MAANTA 0
Labo Qoys oo Mataane yaal ah ayaa la filayaa in ay ku soo biiraan dunida dhawaan sida uu qorshuhu yahay.
Waa marka ay isguursadaan Jeremy iyo Josh Salyers oo ah labo wiil oo mataano ah,waxaana ay guursan doonaan Briana iyo Brittany Deane, oo ah labo gabdhood oo iyana mataano ah.
Lamaanayaasha cusub ayaa isku bartay Munaasibadda sanadlaha ah ee Mataanayaasha Adduunka oo sanadkiiba mar lagu qabto Magaalada Twinsburg ee Gobolka Ohio.
Waxaa ay is alkunteen 2dii Bishan February iyada oo aan wali waqto loo qaban munaasibadda guurkooda oo la filayo in ay dhacdo
Munaasibadda labadan Lamaane ee Mataanayaasha waxa ah ayaa loogu magac daray Twin Lakes State Park,iyada oo dib laga sheegayo waqtiga guurkooda.
Ciidamo Amisom ah oo la dhigayo Wadada udhexeysa Jowhar iyo Balcad
44,922 total views, 1,872 views today
44,922 total views, 1,872 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
44,993 total views, 1,871 views today
44,993 total views, 1,871 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
45,006 total views, 1,870 views today
45,006 total views, 1,870 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
45,028 total views, 1,870 views today
45,028 total views, 1,870 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
45,063 total views, 1,872 views today
45,063 total views, 1,872 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]